Nei Tichifanira Kutisarudza - Far East
Piyona mu Biodegradable Pulp Yakaumbwa Tafura yeMuchina Maindasitiri
1. Far East & Geotegrity ndiyo yekutanga inogadzira michina fiber yakaumbwa tafura michina muChina kubvira 1992. Iine makore makumi matatu ezviitiko mune chirimwa pulp rakaumbwa tafura michina R&D nekugadzira, Far East ndiyo primeiri mune ino ndima.
Isu tiri zvakare mugadziri akabatanidzwa uyo asingatarise chete pamaspuru akaumbwa petafura tekinoroji R&D uye kugadzira michina, asi zvakare nyanzvi yeOEM inogadzira mumaspuru yakaumbwa tafura, ikozvino tiri kumhanya michina mazana maviri mumba nekuburitsa midziyo 250-300 pamwedzi kusvika pamusoro pe70 nyika mhiri kwemakondinendi matanhatu.
2. Far East & Geotegrity ine ese magetsi ekuchengetedza semi-otomatiki michina pamwe nekuchengetedza simba yemahara yekucheka mahara kubaya otomatiki michina muchikamu, isu tinopa mafuta kudziyisa uye magetsi kudziyisa kwevatengi sarudzo.
3. Far East & Geotegrity inowana anopfuura 95 matekinoroji matekinoroji anosanganisira magetsi ekuchengetedza oiri kupisa tekinoroji pamwe nekusununguka kwemahara kubaya tekinoroji tekinoroji iyo inobatsira kuchengetedza 15% mutengo wekugadzira. Iyo michina iri UL uye CE yakasimbiswa. Yedu yemuchina yekuita vimbiso ndeye: 50% simba rekuchengetedza, anopfuura 95% apedza chigadzirwa chiyero, anopfuura makore gumi neshanu ehupenyu hupenyu hwemuchina neforoma
4.Far East & Geotegrity inopa zvese-kutenderera se-yekumira sevhisi, kusanganisira 1-gore muchina warandi, musangano weinjiniya dhizaini, 3D PID dhizaini, pane-saiti kudzidziswa mufekitori yemutengesi, kuraira kwemuchina uye kuraira kwakabudirira mufekitori yemutengi, apedza chigadzirwa kushambadzira nhungamiro uye zvichingodaro.